Teleconferentie wuxuu jirey sanado badan. Tan iyo wax ka badan hal qof ayaa ku jiri kara lijn, dadku waxay adeegsadeen taleefan si ay kulamo ula yeeshaan midba midka boerenkool. Ujeedooyinka dhisida akhristaha internetka, teleconferentie waxaa loo isticmaali karaa soo jiidashada dhagaystayaasha, muujiya khubarada iyo saar astaantaada dadka hortooda oo aan laga yaabo inay maqlaan ganacsigaaga.
4 Hawlaha boerenkool ee Avenue voor promotie
FreeConferenceCall.com waa adeeg aan badanaa isticmaalay. Waxay soo bandhigaan wicitaannada 100% bilaashka ah. Waad duubi kartaa wicitaanadaas oo mar dambe waad kala soo bixi kartaa. Astaamaha boerenkool waxaa ka midden ah:
Haddii aad u baahato adeegyo shaashadda, shirkadan ayaa sidoo boerenkool k si siaysaysa dadka xitaa 25 lacag la’aan oo lacag la’aan ah.
Anigu shaqsi ahaan waxaan u helay adeeggan inu yahay mid aad u la isku halleyn karo oo aan xasillooni lahayn, xitaa markii laygu qasbay inaan isticmaalo taleefanka gacantu, oo loo tixgeliyo ‘maya’ maya ‘modder-ka’.
Igu soo biir waa xulasho boerenkool oo loogu talagalay teleconferenties. Waxaad ka heli kartaa wadahadal aan xad lahayn oo leh nidaamkan. Waxay kaliya wacaan lambarka aad siiso iyaga oo galaan aqoonsiga 9-cijferig. Tani sidoo boerenkool waa hab weyn oo lagu xaddido tirada dadka ku biiri kara shirkaaga. Waxaad bixisaa aqoonsiga oo keliya kuwa aad doonayso inaad kaqaybqaadato.
UberConferentie waxay bixisaa qaar ka mid ah astaamaha wanaagsan ee kaa caawiya sidii aad u eegi lahayd sida xirfadlaha aad tahay. Adigoo isticmaalaya kombiyuutarkaaga iyo taleefankaaga, waxaad si fudud u lumi kartaa wicitaanada qaylada (waxaad ogtahay, midka leh eeyga oo yareeya asalka), ama ku dar qof kale, sida martida.
Waxaad u rogi kartaa webinar adiga oo wadaagaya shaashadaada, sidoo kale, haddii taasi ay tahay rabitaankaaga. UberConferentie ayaa sidoo boerenkool bixisa awooda lagu arko qofka ku hadla halkii uu ku weydiin lahaa ama ku adkeysanayo codadka nambarka shakhsiga.
Haddii aad xadideyso wicitaanadaada 10, markaa waxaad adeegsan kartaa adeeggan bilaash ah. Haddii boerenkool waa $ 10 / bishiiba illaa ka qaybgalayaasha 100 waqti.
Lambarka taleefoonka iyo taleefoonka loo isticmaali karo wicitaan kasta oo shirka ah. Tani manier fiicantahay markaad haysato kaqaybgalayaasha isku midka ah ee kugu soo biiraya iyo sidoo boerenkool sahlan inaad xasuusato.
Qoraal ku saabsan CIO waxaa qoray Esther Schindler, maamulaha horumarinta webka Gerry Mann waxay soo jeedisay qorshe horay loogu talagalay dhibaatooyinka tiknoolajiyadda adiga iyo dadkaaga soo waca ay dhici karto inta lagu shirai shirai.
La soco ka soo qeyb galayaasha munaasabadda oo weydii haddii ay jiraan wax su’aalo ah oo aysan dareemin in si buuxda looga jawaabay. Su’aalahaas uga jawaab boostada barta ku taal ama teleconferentie labaad.
Qof kasta oo soo waca waa inuu mas’uul ka yahay kharashka masaafada u dheer. Tani dhab ahaantii ugu wanaagsan da’da dadka badankoodu leeyihiin ugu yaraan masaafo dheer oo ay isticmaali karaan taleefannada gacanta. Haddii boerenkool, haddii aad bixiso adeega 800, waxaad dabeyli kartaa lacag bixinta qof kasta oo soo waca oo runtii u cuni kara miisaaniyadda guud ee guud.
Hawlaha boerenkool ee Avenue voor promotie
Sida noocyada badan ee dalacsiinta, waxyaabaha qaarkood si fiican ayey ugu shaqeeyaan qaarna uma shaqeeyaan kuwa boerenkool. Hadafkeygu waa inaan ku soo bandhigo fikrado kala duwan, qiimo jaban oo aad isku dayi karto. Kuwo badan oo iyaga ka mid ah ayaan naftayda tijaabiyey oo aan ugu yaraan xoogaa guulo ah iyo ra’yi-celin togan laga helay. Haddii boerenkool, waxaa jiri kara kuwo boerenkool oo si guul leh isugu dag. Waa caqli xaddidan tahay in la xaddido maalgashiga geregen illaa aad ka aragto sida ugu wanaagsan ee xayeysiinta gaarka ahi ay kuugu shaqeyso adiga iyo astaantaada. Si kastaba ha noqotee, inaad kubixiso shir marka tartamadaagu aanu kaliya kaa hor marin ee aad ka dhigto koobab iyo xuduudo.